Ubani ofuna ama-Nugget nama-chips enziwe elebhu? | Scrolla Izindaba
Ubani ofuna ama-Nugget nama-chips enziwe elebhu?
Inyama ekhuliswe elebhu isikhona ngemuva kokuthi i-Singapore iphasise “inyama yenkukhu” ekhule ngezithako ezisekelwe ezitshalweni – futhi ngaphandle kokuhlaba izinkukhu.
Inkampani engemuva kwelebhu yenyama – i-Eat Just – iyitshala ku-bioreactor engamalitha ayi-1,200. I-Guardian ibika ukuthi inyama izobiza ekuqaleni, futhi idayiswe esitolo sokudlela, kodwa ekugcineni izoshibha kunento yangempela.
Zibalelwa kwizigidi ezingama-130 izinkukhu ezibulawa ngosuku.
Izinkampani emhlabeni wonke zixakwa ukutshala inyama yenkomo nengulube emalebhu.
Ukugawulwa kwamahlathi nokuguquka kwesimo sezulu kuqhutshwa ukulima inyama.
UJosh Tetrick we-Eat Just uthe: “Ithemba lami ukuthi lokhu kuholela ezweni lapho iningi lenyama lingadingi ukutholwa ngokubulala isilwane esisodwa noma ukusika isihlahla esisodwa eminyakeni embalwa ezayo.”
ILebhu yama-burger nama-chips iyeza nayo.